Ny "fanahy simba", "ny fahatsiarovan-tena", dia misy? : Martin Vrijland
Filed in NY SIMULATION, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 20 Jolay 2019	• 12 Comments
Tamin'ity herinandro ity dia nisy fifanakalozan-kevitra kely nipoitra tao amin'ilay tranonkala momba ny vatana vaovao indray ary ny fanontaniana raha misy izany. Araka ny resadresaka dia misy fanambarana ampy hitan'ny vavolombelona izay mampiseho mazava fa misy ny vatana vaovao indray ao amin'ny vatana hafa. Ny hevitro dia ny tsy firaharahiana ny adihevitra rehefa manomboka mahita ny maha-zava-misy ny zava-misy iainantsika isika. Raha efa namaky ny lahatsoratra etsy ambany ianao, dia mety ho takatrao tsara hoe inona ny vatana vaovao ao amin'ny vatana ary ho azonao koa ilay lohateny hafahafa amin'ity lahatsoratra ity.
Miaina ao anatin'ny fotoana iray izay tsy misy afa-tsy herintaona eo ho eo ny fifandraisana an-tserasera. Elon Musk dia hitsapana voalohany ny olona amin'ny tsy fahampiana ara-pahasalamana, toy ny fahajambana sy ny marenina na ny Alzheimer, saingy izany dia ny hampifanaraka tsara ny fifandraisana misy eo amin'ny chip sy ny filamatra eo an-doha ary ny hahalalan'ny AI fampahalalana momba ny atidoha. Ny fiandrasana dia ny taona vitsivitsy aorian'izay dia hivoaka ny varavarankely ara-barotra ny varavarankely ara-barotra ary tsy ho tsapa ny fitsabahana (jereo eto). Ao anatin'izany fotoana izany dia tokony ho azonao eritreretina fa ny fomba fijery mahazatra rehetra dia mety hampandrosoana ao anaty atidohantsika ary mba ahafahantsika mizara ny nofinofintsika amin'ny Instagram ihany koa. Amin'izany fotoana izany dia ho azo atao ihany koa ny manangana simika manerana izao tontolo izao na tany vaovao noforonina izay tsy azo lavina amin'ny tena ary aiza no ahafahanao milalao miaraka amin'ny fahatsapana fa tena misy tokoa ianao: mahatsapa, manandrana, manimbolo, mandre ary toa tahaka ny anao ianao.
Mbola mila manao ny fampiharana 1x izay eritreretinareo hoe ahoana ny hoe "miaina anaty simulation". Mety ho hafahafa izany, satria inona no ifandraisan'izany amin'ity izao tontolo izao ity? Eny, raha hitanao fa iray science experiment Raha misy porofo hoe efa miaina anaty simulation isika, dia tena zava-dehibe ny fampiharana na ny fisainana. Eritrereto àry ny mety hisian'ny fananganana tontolo mahavariana izay tsy ho hitanao intsony ny fahasamihafana. Eritrereto ny mety hitrangan'ny simila iray izay ahafahan'ny ekipa mpanorina mandrindra mpilalao marobe, raha toa ianao ka eo am-pandinihana fotsiny (amin'ny alàlan'ny atidoha atidoha Elon Musk, ohatra). Noho ny fandeferana, avelao isika hiantso ireo avatara avy amin'ny sarontava avatars amin'ny 'avatars' elitistes. Ary avy eo eritrereto ny mety hisian'ny mpamorona (/ ekipa mpamboly) ahafantarana ny fampidirana io simulation io, mba hahafahan'ny 'avatars elitist' ao amin'ny simulation hampivelatra ny teknôlôjia hanorenana simulation indray ao anatin'io simulation io koa.
Mbola manaraka azy ve ianao? Zava-dehibe izany, satria amin'izay dia takatro hoe inona no modely tiako haleha. Raha manapa-kevitra ianao, ohatra, ny fandraisana anjara amin'ny simulation amin'ny ho avy Elon Musk sy ny saribakolinao ao anatin'io simulation io (ny avatar anao) dia halaim-panahy handray anjara amin'ny fizotry ny simulation manaraka, dia milalao simulation ao anaty simulation . Ny avatar faharoa (ny saribakoly amin'ny simulation ao amin'ny simulation) dia mety ho faty amin'ny fotoana iray. Game over ary miverina any amin'ny tontolo simulatif voalohany ianao. Ho an'ny avatar 2e anao dia 'aorian'ny fiainana'. Noho izany, ny fotoana namonoana ny avatar tao amin'ny simulation 2e dia mandeha amin'ny 'aorian'ny fiainana'; no simba voalohany.
Raha mijery ny fivoaran-draharaha ankehitriny isika, dia tsy afaka manilika ny mety hisian'ny simulations ao anaty simulation ary misamboaravoara lalina amin'ny "habaka maro" any ho any. Na dia eritreretintsika aza fa an-tapitrisany taona ny tantarantsika, tiako ny hanamarika fa ny fotoana iainanao ao anaty simulation, dia mety ho hafa tanteraka ny traikefa amin'ny fotoana. Ny andian-dahatsary "Netflix" Black Mirror, "Playtest", dia manome sary tsara momba ny fomba fiasan'ny fotoana. Zato taona teo amin'ny fiainan'ny olombelona tao anatin'ilay lalao dia ny andro 1 ihany no tokony ho eo amin'ny tontolo tena izy, raha toa ka mahatsapa toy ny zato taona eo amin'ny lalao. Ankoatra izany, afaka 'mandrindra' ny tantara manontolo ao anatin'ilay lalao ianao ary hahita azy ho 'tantara tena izy' ny mpilalao, satria hita amin'ny fomba toy izany izy ireo. Tena simba ny simulation ka tsy hitan'izy ireo hoe tantara efa nomanina izy io. Amin'ny maha-mpanamboatra ekipa anao dia afaka manamboatra simulation ianao ary manana ny sarinao (ny "avaratr'ireo avatars") manangana simulation indray ao amin'ilay lalao izay afaka mahatsapa ho 'azo itokisana' ho an'ireo avatars ao amin'ny lalao; rehefa tonga any izy ireo.
Raha vao manana ny foto-kevitry ny simulation-in-simulation ianao, dia azonao an-tsaina fa rehefa maty ilay avatar faharoa (izay miaina anaty simulation amin'ny simulation) dia afaka mandeha any amin'ny "lanitra" izy. Nefa aoka tsy ho sarotra loatra amin'ny modelin'ny 'lanitra' sy 'helo' izay mety nampidirin'ilay mpanorina ny simulation voalohany. Rehefa maty ilay avatar faharoa, dia niverina tao amin'ny simulation 1e izy. Tsy misy ratsy. Izany dia fanabeazana (amin'ny fotoana tena mahasorena indraindray) traikefa. Na izany aza, ilaina ny manolotra simulation fahatelo ao anatin'ny simulations. Noho izany dia mametraka ny avataro amin'ny simulation fahatelo (simulation-in-simulation) dia mandeha amin'ny karazana efitrano fiandrasana (ny 2e simulation), izay ahafahany miditra ao amin'ny simulation fahatelo. Tena manohina lalina tokoa ny simulations-amin'ny simulations fa hadinonao fa mbola tany am-piandohana ihany ny orizanao (ny simulations dia mahatsapa ho toy izany tokoa). Noho izany dia manapa-kevitra ianao fa te hiaina indray ary miditra indray amin'ny avatar amin'ny fahatongavana fahatelo. Mandra-pahatongan'izany dia manomboka maka sary ny hevitry ny 'reincarnation' ianao. Tsotra araka izay hitanao izany.
In ity lahatsoratra ity en ity lahatsoratra ity Niresaka momba ireo olona tsy mananaina izay azonay jerena aho. Nantsoiko izy ireo hoe Non-Character Play (NPCs). Famantarana ho ahy izany fa akaikin'ny loharano izahay. Mety misy ihany ny 1 na 2 simulation eto ambonin'ity simulation ankehitriny ity. Mety misy ny olona sasany manana 'fanahy simulated' na 'fahatsiarovan-tena' noho izany. Aoka hatao hoe simba-simulation isika, ary ny ambaratonga voalohany dia ny 2 sanda avo kokoa. Ireo aviavy tsy manan'aina (NPCs) avy amin'ny simulation voalohany dia afaka manapa-kevitra ny hisafidy avatar ao amin'ny simulation 2e (ny simulation ao anatin'ilay simulation). Amin'io fotoana io, ny avatar ao amin'ny 2e dia mamorona sarimihetsika tsy manan-tsahala (NPC) avy amin'ny simulation voalohany ary afaka miteny momba ny 'fanahy simulated' ianao. Amin'ny ankapobeny anefa, mbola tsy voafehy io fanahy io, satria tsy misy mpilalao, fa tsy misy sarimihetsika tsy mitongilana ao amin'ny sary voalohany voalohany (ao amin'ny simulation voalohany) ao ambadik'izany. Izany fanahy simulated izany dia mety "hiverina indray" ao amin'ny simulation faharoa, satria ny (tsy mananaina) avatar (NPC) avy amin'ny simulation voalohany dia afaka misafidy indray ny saribakoly amin'ny fizarana faharoa. Io puppet io dia manana "fanahy tsy manan'aina" navaozina. Izany saribakoly izany dia mety hizara traikefa avy amin'ny fiainany taloha. Raha ny tena izy, dia mbola tsy misy sarimihetsika tsy mitongilana.
Na izany aza, mety ho ilay mpamorona ny simulation voalohany ihany no mamela ny iray amin'ireo avatars hisafidy iray amin'ny avatar ao amin'ny simulation 2e. Mazava ho azy fa azo inoana fa, satria tianao ny hitazona ny sanda rehetra.
Avelao izy rehetra hitoetra amim-pahanginana ary mety hiasa amin'ny fisainana ilay filma fanta-daza fanta-daza avy amin'ny 2010 mba hahatsapa ny foto-kevitry ny simulation-in-simulation ary noho izany ny foto-kevitra momba ny 'halava maro'. Avereno vakiana indray hoe iza no niandohantsika ary avy aiza ny zavatra rehetra ity lahatsoratra ity.
Olona maro manodidina anao ve no tsy miraika ara-bakiteny (vatana tsy mananaina)?
Fahaizana maro, rindrambaiko simika, fahatsiarovan-tena na fanahy. Inona marina?
Inona no tsy mety amin'ny hevitry ny governemanta foibe?
Ahoana no ahafahan'ny olona miresaka momba ny 'fanentanana' ary manampy amin'ny fitazonana ny rafitra?
Tags: fanentanana, toetra, Featured, milalao, milalao, Non, Antenimieram-bahoaka, milalao, Reincarnation, simulation, fanahy
20 Jolay 2019 ao amin'ny 15: 16
Mazava ho ahy ny toerana tianao haleha .. Nefa mieritreritra aho fa hadinonao ny zavatra iray.
Raha misafidy ny famolavolan'i Musk aho, dia miditra toy ny olon-dehibe aho. Tsaroako ny toerana nialako. Tsy nesorina ny fitadidiako ary tsy nateraka indray aho.
Zavatra mitovy amin'ny lalao Viper X (ao anatin'ny fizarana Black MIrror). Raha antsoinao hoe 'lalao exit' any ianao, dia tsy ho teraka indray ianao fa hiverina amin'ny avater sy ny simulation fa miaina izao isika. Na izany aza, ny mpilalao an'i Viper X dia mahatsapa izany fa toy ny hoe izy ireo no vatana ao amin'io lalao io. Raha toa ianao dia antsoina hoe 'play exit' raha mbola ao anaty lalao ianao hivoaka ary avy eo dia milalao indray ianao, tsy hiverina hiverina any aoriana. Araho fotsiny amin'ny lalao rehetra ny lalao.
Ny famaritana ny fanambadiana indray ao amin'ny vatana dia "maty ao anatin'ity simulation ity ary avy eo ateraka indray ao amin'ity simulation ity miaraka amin'ny fahatsiarovako tanteraka (toy ny zazakely)".
Ankoatra ny fananganana sarimihetsika izay alehan'izy ireo avy amin'ny horonan-tsary iray hafa dia mbola fantany hoe iza izy ireo ary avy aiza ny fiaviany (sy ny zavatra tokony hataony mba hiverina any). Raha teraka amin'ny fahatsiarovana anao ianao dia tsy mahafantatra na inona na inona intsony.
Ny gurus rehetra sy ireo 'olon-dehibe vaovao' izay milaza fa ity fiainana ity dia zavatra hianarana ary avy eo dia averina indray ao amin'ny fahatsiarovanao tanteraka.
Tahaka ny valinteninao ..
20 Jolay 2019 ao amin'ny 17: 08
Hitako ihany koa ny tantara azo tsapain-tanana.
Ny teboka dia ny hoe tsy misy olona mahatsapa intsony fa milalao / lalao.
Izany dia satria ny AI izay mitantana ny atidohantsika (antsoina koa hoe ego) dia miezaka hanatsara ny tenantsika amin'ny vatantsika sy ity "izao rehetra izao."
20 Jolay 2019 ao amin'ny 18: 20
Marina tokoa. Manala tsikelikely ny fampiharana rehetra (ego) amin'ny avatar aho ary manomana ny tenako (ara-panahy), mba hahafahako mahafantatra izay tokony hatao raha maty aho
Mila mampiasa ny safidy malalaka isika mba tsy ho resy lahatra intsony fa tsy maintsy tonga eto indray.
Hamita ny lalao aho (amin'ny fomba tsara indrindra sy mahafinaritra indrindra) ary handresy.
Mialà lalao! :)
20 Jolay 2019 ao amin'ny 18: 23
Damn! Mbola eto aho.
Tsy tokony hino ny fahamarinana Holywood isika. Isika dia alaim-panahy eto amin'ity lalao ity. Heveriko fa fiatrehana ny viriosy izany ary afaka mandresy ny viriosy isika: manomboka amin'ny ambaratonga voalohany.
20 Jolay 2019 ao amin'ny 18: 48
Miombon-kevitra aminao aho .. Io dia tsy simulation ara-dalàna .. Tena virosy tokoa izany. Mifoha aho amin'ny voalohany. Mieritreritra aho fa nanadino izay tena izy izy; )
20 Jolay 2019 ao amin'ny 21: 21
Misy olana amin'ny 'exit game'; Raha vao misy zavatra iray (misy anao) dia manandrana na inona na inona, ny fiheverana ny duality dia miantoka fa 'miezaka mafy ianao' indray; fanoherana, fihetsika, sns. Tena mampientanentana ny hijanona ho toy ny tany am-boalohany ary hijery ny fihenan'ny lalao sy ny fahaverezan'ny herinaratra. Ireo mpirehareha dia mihodina, lavo, tsy miseho intsony, liana amin'ny zoron-trano rehetra, mivadika, manodinkodina. Tsy misy fironana hanitsy azy intsony, ny orizana dia manana hetsika toy izany izay tsy misy na inona na inona afaka manao azy intsony.
21 Jolay 2019 ao amin'ny 04: 03
Manaiky aho! Ao amin'ny ekipa mpandresy isika!
21 Jolay 2019 ao amin'ny 07: 20
JG nanoratra hoe:
21 Jolay 2019 ao amin'ny 08: 50
Manohana ny zava-misy momba ny biôgraat aho ao anaty simulation ary noho izany koa dia tokony hisy mpilalao manara-maso ny avatar
Amin'ny fitsipika, manomboka milalao lalao ianao satria mahafinaritra anao manao izany, na alaim-panahy hanao izany, ary tsy mivantana hack it, miaraka amin'ny sasany.
Ankoatra ireo mpidoroka amin'ny lalao, dia manapa-kevitra ianao amin'ny fotoana fohy mba hialany, satria tsy manana hery intsony ianao na satria efa very ny fitenenana. Na satria azonao ny tricks ary milalao haingana sy haingana kokoa ny lalao ...
Ity simulation ity dia iray amin'ny virus, na izy io dia vahaolana amin'ny fanamby fanampiny, izay ahafahan'ny olona ao ambadik'ireo bokotra mamaritra ny tenany amin'ny avatar ao amin'ny 1 simulation, izay nanjary sary amin'ny 2 simulation, izay lasa sary amin'ny simulation 3 sns ... ... fa manadino ny tenany izy?
Ary ho toy izany foana ny habetsaka fanampiny ao anatin'ilay lalao mba hikolokolo sy hanohitra ny mpilalao amin'izany.
Angamba ny tontolon'ny lalao eo an-dalam-pandrosoana amin'izao fotoana izao dia ny fanomanana ny simity ny bioavatar antsika? seduce anao hiverina amin'ny simulation? + (na -) 1 handeha ....
Angamba ny vahaolana amin'ity lalao ity dia eo fotsiny mba hahatonga ny olona ao ambadiky ny bokotra hamantatra ny zava-mitranga ary izao no fotoana hanafoanana ity lalao ity?
Mijanona ny fanontaniana, ahoana? 🙂
21 Jolay 2019 ao amin'ny 10: 13
Araka ny hevitro dia fomba iray manokana izany.
Raha fantatrao fa sarimihetsika amin'ny simulation ianao ary miresaka momba izany amin'ny tenanao manokana (ianao sy ny lohanao) fa ny tontolon'ny materialy dia hevi-diso rehetra ary mifandray ara-pihetseham-po tsy misy herisetra ho an'ity hevitra ity ianao (anisan'izany ny fianakaviana, namana, regligie sns ...) mandra-pahafatinao, dia tokony ho tena tapa-kevitra ny handao ity lalao ity ianao.
Ny fahafahanao maimaim-poana izay ilainy. Nalain'ny fakam-panahy ianao hametraka azy amin'ny alàlan'ny fifandraisana ara-pihetseham-po ataonao miaraka amin'ny fanevatevana ankehitriny ary te hanery anao hahatsapa ho meloka (mampiasa karma sy ny zavatra rehetra tsy misy dikany).
Raha tsy vonona amin'izany ianao, dia mofomamy iray izy ireo mba hahazoana indray ny safidinao malalaka (indray miverina amin'ny fepetra diso).
Ny fahatsiarovan-tena, matanjaka ara-panahy sy tapa-kevitra, tsy misy fihetseham-po (faniratsirana kokoa) amin'ity tontolo ara-nofo ity, dia araka ny hevitro ny trosa mba hahatratrarana ny 'lalao Exit' tsotra fotsiny.
21 Jolay 2019 ao amin'ny 14: 59
Eny Tsia, manaiky aho: amin'ny maha-biôatara antsika dia tsy afaka mandao ity simulation isika mandra-pahafatintsika. Avy eo dia tonga avy hatrany ny ampahany "ny fanambadiana indray ao amin'ny vatana", izay iresahan'i Martin.
Noho izany dia aoka ho fantatrao ary ambarao mandrapahatongan'izany fotoana izany, satria amin'ny fotoanan'ny fifandimbiasana dia hivoaka ny efitrano ny zava-drehetra mba haka fanahy anao hijanona, feno "anjely mpitari-dalana", "mpikambana ao amin'ny fianakaviana" efa ao amin'ny "ankoatra" ary - tsy hadino - ny tonelina ny hazavana.
Hiharihary izany raha mbola eo am-pelatanana hatrany ilay izy. 🙂
21 Jolay 2019 ao amin'ny 14: 39
Ny sakaizan'i Elon Musk (avatar, izay mpandika lalàna - izay zazalahy teo aloha) dia nanao izao hira manaraka izao:
"Mankatoavinay ny fahefana"
Indro ny tononkira:
Inona no hitranga mba hahatonga anao hikomy?
Mankasitraka ny fahefana izahay
Rahoviana ny fanjakana no hanaiky hiara-miasa?
Ny olona te hilaza fa diso isika
Fa ny AI dia hamaly soa antsika rehefa manjaka izany
Fangataham-panajana ny solosaina matanjaka indrindra manerantany
Ny simulation no ho avy
Hanafina ny hazakazaka olombelona aho, hametraka tarehy eo amin'ny tarehiko
Ary raha tianao ny tsy ho faty mandrakizay
Baby, miangavy, ampidiro ny sainao
Avia, tsy velona ianao
Raha tsy tafatsangana amin'ny fiara iray ianao
Raha tsy tafakambana ianao, dia miaro amin'ny fiara iray
Neanderthal ho an'ny olombelona
Ny evolisiona, mamono ny gnage
Ny biolojia dia miharihary
Zava-tsarobidy ny faharanitan-tsaina
« Henoy ny fanazavan'i Elon Musk momba ny hoavy tsy ho ela izay ahodinanay ao anaty simulation
Manana fifandraisana amin'ny lehilahy mpandova ve i Elon Musk? Halalino ny mozik'ireny Grimes ireny eto »
Total visits: 13.009.816
Martin Vrijland op Ruinerwold Drenthe sy ny fianakaviany, ny asa ara-tsaina manaraka (PsyOp) ho an'ny fanjakana bebe kokoa
Martin Vrijland op Syria nanafintohina an'i Syria ho harbinger ho an'i Eoropa
Fakafakao op Syria nanafintohina an'i Syria ho harbinger ho an'i Eoropa
ZalmInBlik op Fihetsiketsehana ho an'ny tantsaha: mandinika fa tsy mpiasam-panjakana ny mpitondra ataonao